Potassium na-aga n’ihu
Potassium fluoborate bụ kristal ọcha ọcha ntụ ntụ. Ubé soluble na mmiri, ethanol na ether, ma unyi anaghị agbasa na alkaline ngwọta. Ihe njupụta metụtara (d20) bụ 2.498. Ebe mgbaze: 530℃ (decomposition)
Ka ọ dị ugbu a, Yousheng etinyela ikike ọhụrụ na mmepe nke akwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Iji melite ngwaahịa mma, ọ ọhụrụ nyekwara ke mgbanaka spinning na-emeghe-ọgwụgwụ spinning akụrụngwa. Ụlọ ọrụ ahụ''s na-eduga ngwaahịa nwere ọtụtụ usoro: niile-owu ulo oru akwa, niile-polyester ulo oru akwa, polyester-owu ulo oru akwa, wdg The isi na ngwaahịa ndị tumadi adabara emery ákwà azụ isi.
Cryolite bụ ntụ ntụ na-acha ọcha. Mmiri dị ntakịrị soluble na mmiri, na njupụta nke 2.95-3.0, na ebe agbaze banyere 1000 Celsius. Ọ dị mfe ịmịkọrọ mmiri mmiri wee nwee ike ibibi ya site na acid siri ike dịka sulfuric acid na hydrochloric acid iji mepụta nnu aluminom na sodium.
Njirimara ngwaahịa: teknụzụ ọhụụ, ịkọ nkọ, ịmị egweri, nguzogide dị elu, ịdị ike dị elu, arụmọrụ dị elu na adịghị mfe iyi, diamond edo na aja, ezigbo ọrụ, nchekwa na nchekwa gburugburu ebe obibi, mbepụ na-enweghị mgbanaka na uru ndị ọzọ. .
Ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị maka: iche iche nke metal na-abụghị metal ihe, egweri tungsten ígwè, -egwe ọka egbutusị, alloys, diamonds, iko, ceramik, semiconductor ihe (sịlịkọn carbide, wdg), magnetik ihe (magnetik cores, magnetik Ibé akwụkwọ, ferrites, wdg) na ihe na-egbuke egbuke (ihe siri ike, ígwè tungsten YG8, wdg)
[Detuo] Brazed egweri wheel
Abrasives dị elu na abrasive abrasives na-ekpo ọkụ ọkụ.
Njirimara ngwaahịa: nchekwa ngwaahịa, arụmọrụ dị elu, oke nkenke, ihe na-eyi na-eguzogide, na-adịgide adịgide ma na-adịgide adịgide, yana atụmatụ nke nguzogide mgbatị dị elu, nguzogide mmetụta, nkwụsi ike na-eguzogide, ọsọ ọsọ ọsọ, ịmị ire ụtọ, ogologo ndụ ọrụ, wdg.
Ngwaahịa na-bụ-eji maka: egweri, nchara mwepụ, polishing, metal-egweri, ịgbado ọkụ onuete egweri, ịgbado ọkụ onuete chamfering, na elu derusting.
Diamond na resin bond na-ekpo ọkụ kpoo iji mepụta ngwaahịa.
Brazed diamond egweri wheel
N'ọhịa nke teknụzụ na-egbuke egbuke, Yousheng na-emepụta diski abrasive ọhụrụ maka ịkpụchasị, gụnyere ájá ájá na velvet body, ha abụọ na-edozi ma jikọta ha. A na-ejikọta teepu Velcro na tray ahụ site na ajị anụ ahụ, nke dị mfe ịgbakọta na iji. E jiri ya tụnyere ngwaahịa polishing na-egbu maramara, njirimara bụ isi nke diski ájá bụ na ọ nwere ike ịmịkọrọ ntụ na ntụ na-emepụta na usoro nhazi n'oge, melite nhazi nhazi, ma belata uzuzu na ufe na-efe efe. E wezụga nke ahụ, ọ nwere ezigbo nchekwa gburugburu ebe obibi. Njirimara ndị a niile nwere ike melite gburugburu ọrụ.
Brown corundum, calcined corundum, na zirconium corundum louvre ngwaahịa:
Brown corundum, calcined corundum, na zirconium corundum louvres na-agbanwe agbanwe na resin-yiri egweri wiil. Ha nwere ike ekwedo, elu mkpakọ eguzogide, ekwe-eguzogide, ọma onwe-adị nkọ, elu egweri ọnụego, na ala mkpọtụ. Okwesiri maka nchacha na nchapu ígwè, nchara, igwe nchara, igwe nkedo, aluminom, osisi, plastik na ihe ndi ozo.
Environment-friendly mejupụtara ájá diski 28 ụdị:
A na-eji akwa emerụ a na-eme ka gburugburu ebe obibi na-eme ka ikuku diski 28 mee ihe pụrụ iche emery emeriri na mkpụrụedemede na gburugburu ebe obibi. A na-eji SG (super green) abrasive disc nke gburugburu ebe obibi nwere nchekwa dị elu na ezigbo mgbanwe; emery akwa na mkpụrụ bụ ma environmentally friendly. A na-eji ihe ahụ eme ihe na-eme ka ikpo ọkụ na agba nke ụgbọ mmiri, ụgbọ ala na ụgbọ elu.